synchronous mgba ọkụ
thyristor mgba ọkụ
ọgụgụ isi capacitor
Mkpa nke na-adọ nkewa akpaka ụgwọ maka ọgụgụ isi reactive ike ụgwọ capacitor
site ha na 20-10-23
Nkeji nkewa nkewa akpaghị aka ụgwọ nke nwere ọgụgụ isi reactive ike ụgwọ capacitor nwere ike kee ya n'ime ụzọ atọ capacitor akpaka ụgwọ na gbawara n'etiti adọ capacitor akpaka ụgwọ dị ka ha Njirimara. Atọ adọ capacitance akpaka ụgwọ bụ suita ...
Gịnị bụ ọrụ nke ọgụgụ isi ala voltaji ike capacitor na Ọdịdị
Onye nwere ikike ime ihe ike dị obere nwere ike mebie site na akụrụngwa na-arụ ọrụ ike na-arụ ọrụ na nhazi, na-ahụta usoro ọhụụ nke njikwa na-achịkwa na njikwa etiti; ụgwọ usoro nwere njirimara nke obere ngwaọrụ, obere okpomọkụ ris ...
Ọrụ usoro nke ike capacitor
(1) Nchekwa ọrụ nke capacitor The capacitor ga-arụ ọrụ na gosiri voltaji. ka Maka oge a, ọ gaghị ekwe omume ịrụ ọrụ n'ime oke nke 5% nke voltage gosiri; mgbe ọ gafere oge 1.1 nke voltage gosiri, naanị ọrụ dị mkpirikpi ka akwadoro. Otú ọ dị, overvoltage nke outgoin ...
Adreesị:140lọ 1401, nke 1, ụlọ 3, Nke 99, South mgbanaka mgbanaka, mpaghara mpaghara dị elu, Xinxiang City, Henan Province